"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : G-mail Inbox အသစ်ပြောင်းသွားပြီနော်
G-mail Inbox အသစ်ပြောင်းသွားပြီနော်
သင်၏ G-mail Inbox ထဲသို့ရောက်ရှိလာမဲ့ သတင်းများကို အုပ်စုအလုက်ခွဲခြားပေး လုက်ပြိဖြစ်ပါ တယ်။ Primary, Promotions, Social နှင့် Updates တို့အပြင် Forums တို့ကိုပါထဲသွင်းပေးထားပါတယ်။ သင်လိုသလိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဝင်ရောက်လာမဲ့ သတင်းတွေကို အမျိုးအစားခွဲထားပေးခြင်းဖြစ် သင်ဖတ်လိုသောသတင်းကို သင်ဦးစားပေးဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ အောက်ပါသရုပ်ပြပုံလေးကတော့ အသုံးပြုရာမှာလွယ်ကူစေအောင် ပြသထားပေးပါတယ်။
ဤအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန် အောက်ပါအဆင့် ၄ ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါ၊
ညာဘက်အထက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Gear icon ကို Click နှိပ်ပါ ထို့နောက် Configure inbox ကိုရွေးပေးပါ၊
သင်ကြည့်လိုတဲ့ Tabs ကိုရွေးပေးပါ၊
Save မှာ Click နှိပ်ပေးပါ
အကယ်၍သင်ဒီနည်းကို အသုံးမပြုလိုပါက Change your inbox style ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပြိးပြောင်းနိုင်ပါသည်။
သင် Inbox ထဲကိုဝင်လာမဲ့သတင်းတွေကို အလိုလျှောက်နေရာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Primary Primary ဒီခေါင်းစဉ်အောက်က Message များကတော့ သင့် မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုများမှလာတာဖြစ်ပြှီး အခြား သတင်း Message များနှင့်ရောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Promotions Promotion နေရာက Message တွေကတော့ သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်အပါအဝင် သင့်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပါတ် သက်သော ငွေကြေးကေါက်ခံမှု နှင် ပေးခြေရန် သတင်းမှားရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Social Social နေရာမှာတော့ Social Networks, Media-Sharing Sites, Online Dating Services, Gaming Platforms, နှင့် Other social Websites များမှလာသော သတင်းများကိုထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Updates Update မှာဝင်မဲ့ Message များကတော့ သင့်ကို Update လုပ်စေလိုသော Website များနှင့် Software Site များကလာမဲ့ သတင်းများကိုထဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Forums Forums မှာဝင်မဲ့သတင်းက သင့် Forums Website များနှင့် ချိပ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဘူးမှသာ သတင်းများ ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Show နှင့် Hide Tabs များပြုလုပ်ပေးခြင်း
ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Tabs တွေထဲ့မှ + Icon ပေါ်မှာ Click နှိပ်ပါ
Checkboxes ကိုအသုံးပြုပြီး ပြထားလိုသော Tab နှင့် ဖြောက်ထားလိုသော Tab ကိုရွေးပါ.
ပြိးနောက် Save မှာ Click နှိပ်ပါ။
သင်က Tab တစ်ခုကိုဖြောက်ထားမယ်ဆိုပါက ထို Tab နှင့်ဆိုသော သတင်းများက သင်၏ Primary Box ထဲကိ်ုသတင်းများဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Category Tabs မှ သတင်းအသစ်များ
Message အသစ်များကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ Tab တစ်ခုချင်းဆီသို့ အသီးသီးဝင် ရောက်သွားပြီး ယခင်ကဝင်ထားပြိးသား Message များကိုလဲအောက်မှာ ဆက်လက်ပြသထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သတင်းအသစ်နှင့် အဟောင်းများမှသင်ဖတ်လိုသော သတင်းများကိ်ု ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ Promotions ထဲမှာ သတင်း ၈ ခုဝင်တယ်ဆိုပါက ထိုသတင်း အသစ် ၈ ခုကိုပြသပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်မဖတ်ရသေးသော Message များကိုလည်း Primary Tab ကနေ G-mail ကသင့်ကိုသိပေး
Tabs များအတွင့်က message များကို ရွှေပြောင်းခြင်း
သင် Inbox အတွင့်မှာမြင်နေတဲ့ Message များကို အခြားသော Tabs များထဲသို့လဲပြောင်းရွှေပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ပြောင်းလိုသော Message ကို Drag ဆွဲပြိးပြောင်းပေးလိုသော Tab ဆွဲသွား ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။. သင်ပြောင်းပြီးသွားမှ မပြောင်းရွှေလိုတော့ ပါက Undo ကို Click နှိပ်ပေးလိုက်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Messages များကို Star အမှတ်သားပေးခြင်း Tip လုပ်ခြင်းများကိုလည်း သင်စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်၊
Posted by Than Minn Naing at 8:01 PM